* Qaphela: Lo nguhlaziyo olutsha lwe-Pinterest ceļvedis. Utshintsho olutsha kwi-Pinterest kunye namanye amaqiniso / uphando luyongezwa kwiingcebiso zethu.
Ukuba kukho vērā eyenza i-21st yekhulu labantu bahluke ngokupheleleyo kwi-19. okanye nakubantu be-20th century, yimfuno yabo yomxholo obonakalayo ngaphezulu kokubhaliweyo-kuphela.
Njengama-Instagram, uPinterest wazalwa ukuze afikelele kwiimfuno zanamhlanje zokubonwa.
Imifanekiso, iifoto, imizekeliso, i-infographics, kunye nepeyinti ye-e-yonke idlulisela imiyalezo kwingqondo isebenzisa kuphela amehlo abantu njengemoto, kunye neengqondo zigcinwa ngokukhawuleza kakhulu. Isizathu soku Kulula kwingqondo ukufumana ‘umfanekiso omkhulu’ kunye neziboniso kunokuba ngamazwi, apho kufuneka kwenziwe umsebenzi owongezelelweyo ukuqonda umxholo ngokubanzi.
1 1. Nje nge-Infographics? Pinterest INGXELO
2 2. Ukuphawula kwiPalati kunye neMpendulo Amazwana
3 3. Sebenzisa izixhumanisi ezixhasayo okanye Fumana Ubumba
4 4. Yenza iiplagi zeBhlogI ”
5 5. Fakela Ibhizinisi Lakho!
Yintoni enokuyenza inkonti? Jonga i-infographic epheleleyo afa.
1. Nje nge-Infographics? Pinterest INGXELO
Yakha i-pin draudzīga infografika kwaye uyikhuthaze kubalandeli bakho nakwiwebhusayithi yakho.
I-infographics kunye nentengiso yePinterest ngumdlalo ofanelekileyo. Ngenxa yokuseta okubonakalayo kukaPinterest, yindawo yemvelo ye-infographics ukufumana abaphulaphuli kwaye wabelane.
Ku-2017 lietotne Pinterest (ye-iPhone, i-Android kunye newebhu) yaziswa Iingcamango Zethuba, isici esivumela abasebenzisi ukuba badonsa isangqa kwiphina nganye ukubonisa iingcamango ezinxulumene (umzekelo: zokuphekahahahahahakobo kunko neifako. Ezi ziindaba ezilungileyo xa usebenzisa iPinterest ngokuyinhloko kwi-infographics ngenxa yokuba
2. Ukuphawula kwiPalati kunye neMpendulo Amazwana
Akunyanzelekanga ukuba uthande okanye uphinde wabelane ngezikhonkwane zakho ozithandayo – unokufaka izimvo kwiPini uphendule kubahlaziyi bakho.
Kwakhe yokuthumela Kwi-Business2Community, UDillon Diatio uthi, ngelixa i-Pinterest ininzi ibhodi ebonakalayo kunomnatha woluntu, unokwakhiwa koluntu malunga nomxholo owabelana ngawo okanye ukwabelana kwakhona, kwaye unike abanye abantu ithuba lokuba yinxalenye yalo kwaye bafumane abasebenzisi bePinterest Bazi Zakho iingcamango, kungekhona NJE iziboniso Zakho.
Kwakhona, izimvo ngokubanzi ziye zindlela enkulu yokufumana abalandeli abatsha nokudala ubudlelwane ukususela ekuzalweni kweendawo zokuqala zoluntu (iifom kunye neeblogi), ngoko kuya kusebenza kwiPinterest.
3. Sebenzisa izixhumanisi ezixhasayo okanye Fumana Ubumba
Emva kwesibhengezo sikaPinterest, somhla kaFebruwari 2015, esazisa ngomgaqo wokurhoxisa zonke ii-ID ezizidibanisayo kwiPini, zonke iibhlog kunye nabathengisi kwihlabathi liphela bayonwabela iindaba zokuba, Ngomhihi kayiyiyaka zibakaya, Ngomhihi kayiyiyiyiya zakuba, Ngomhih.
"Kwixesha elidlulileyo, sasisusa izixhumanisi ezihambelanayo ukusuka ePinterest kuba abagaxekile babasebenzisa kakubi," watsho uAdelin Cai, inkokeli yeqela lePolisi ePinterest. "Ngoku ukuba inkqubo yethu yokufumanisa ugaxekile kakhulu, sikulungele ukuvumela ukudibanisa kwakhona."
Nangona kunjalo, ukuba usasafuna ukuyidlala ukhuselekile, unokufumana ubuchule kwaye ungeze umgca womxholo phakathi kwePinterest kunye nekhonkco yakho yokubambisana. Bhala ibhokisi yeblogi vai ukwakha indawo yomhlaba apho uza kuhlolisisa umkhiqizo onxulumeneyo kwaye ungeze imifanekiso, ubungqina (okanye ukumema abafundi abasebenzise le mveliso ukubeka izimvo kipol "Tadga" kififa.
I-URL oyifakayo kwi-Pinterest iya kuba yiposi yakho yeblogi.
4. Yenza iiplagi zeBhlogI ”
Njengoko kwe-2016, ukubala okuphindaphindiweyo kuguqulwa kumntu ngamnye kuya kuhlanganiswe, ngoko ke akusabathembeki njengomlinganiselo wokubandakanyeka nge-pin. Nangona kunjalo, kusekho izixhobo zokuhlaziya i-Pinterest ngaphandle-njengaye Umhloli wePhini – ezibonisa ukubala kwamanani eepini, ngoko unokufuna ukuncedisa i-Pinterest analytics yakho ngesixhobo solu hlobo ukuze ulandele.
Njengoko ka 2017. gada decembris, Pinterest uqalise i-chat bot kwi-Facebook Messenger ngoko abasebenzisi bangabelana ngePalati kunye noonxibelelwano kwi-Messenger.
Iphulo kukukwenza ukuba baziwa ngabafundi (kunye nabasebenzisi bePinterest) ukuba bakwazi ukwabelana kalula nePhini lakho kunye nabahlobo babo be-Facebook, kwakhona, usebenzisa olu khetho; ukuba zichaphazelekayo kwiinjongo zakho, xhaphaza kule nzeka phantsi kwePhini yakho kunye nesithuba sakho.
5. Fakela Ibhizinisi Lakho!
NgoJanuwari i-2017, uPinterest yazisa amaqela adwendwe ngamaphulo ahlawuliweyo ukwenzela ukuba kube lula ngabavakalisi ukuba banike uhlahlo lwabiwo-mali kumaqela athile. Lo mbandela omtsha uza kuba uncedo ekulawuleni uhlahlo lwabiwo-mali ngendlela ehlakaniphile, uqondise kwiindawo ezichaphazelekayo kunye neendawo ze-geo.
Ungavavanya iintengiso zakho ngaphambi kokuchitha imali, ke kufanelekile ukuzama.
Iingcebiso ezimangalisayo ukusuka Deepanshu Gahlaut: